S. Shirkaddaadu ma tahay shirkad wax soo saarta ama shirkad ganacsi?
J: Waxaan nahay warshad leh xarun horumarinta alaabta noo gaar ah, aqoon-is-weydaarsiga wax soo saarka muraayadaha indhaha, aqoon-is-weydaarsiga telescope-ka, aqoon-is-weydaarsiga kulanka aragga habeenkii, iyo aqoon-is-weydaarsiga cabbirka.
Isla mar ahaantaana, warshadeena waxay leedahay waaxda iibka ganacsiga dibadda oo xirfad leh iyo koox wax iibisa oo si fiican u Ingiriisi.
S: Waa maxay MOQ kaaga?
A: MOQ waa 1 PC.
S. Shirkaddaadu ma bixisaa adeeg sumadeedka gaarka ah?
J: HAA. Fadlan noo soo dir LOGO-gaaga, waanu kuu qori doonaa;
Haddii aad u baahan tahay inaanu naqshadeyno, naqshadeeyayaashayadu waxay kaa caawin doonaan inaad dhammaystirto shaqada.
Q. Alaabtaadu ma leedahay wax dammaanad ah?
J: Haa, waxaanu bixinaa dammaanad xaddidan oo 24 bilood ah alaabtayada.
Marka laga reebo si xun u isticmaalka, kaydinta khaldan, iyo dhaawaca ula kac ah.
S. Waa maxay habka lacag-bixintaadu?
J: Badanaaba waxaanu aqbalnaa wareejinta bangiga, Western Union, iyo MoneyGram.Hababka lacag-bixinta ayaa la qabsan kara shuruudahaaga gaarka ah.
Waddamo kala duwan, hababka lacag-bixinta ee aan aqbalno way ku kala duwan yihiin midba midka kale.
S. Waa maxay habka aad dhoofintu?
A: Waxaan bixinaa habab maraakiibta oo dhamaystiran.
(1) Habka degdega ah: ku haboon muunado, 3-5 maalmood si ay u yimaadaan.Fedex, DHL, TNT, UPS
(2) Gaadiidka badda: ku habboon dalabaadka badan, ku imaada 19-25 maalmood.
(3) Gaadiidka hawada: ku habboon dalabaadka badan, 25-35 maalmood si ay u yimaadaan.
S.Ma dammaanad qaadaysaa keenista badqabka iyo badbaadada leh ee alaabta?
S. Ka waran khidmadaha rarida?